ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 29, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
Israelသရေလလူမျိုး၏လက်မှတ်တွင်“ စာရေးဆရာ။ အတိုင်ပင်ခံ။ လူတော်။" သူကတကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်ပဲ! ဒီနေ့ Shel ကကျွန်တော်တို့ကိုရေးခဲ့တယ် Preview အတွက်ဘလော့ဂါများအတွက်သူတို့၏ site ကိုဖွင့်ပေးသည်၊ သူ၏ client၊ Scrapblog အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ။ ငါလမ်းလျှောက်သွားခဲ့တယ် ကြည့်စမ်း နှင့်လွခဲ့သည်!
သမားရိုးကျပရိုဂရမ်မာများကကွန်ယက်ပေါ်တွင်အင်တာနက်အက်ပလီကေးရှင်းများသည် Desktop အက်ပလီကေးရှင်းများနေရာတွင်မည်သည့်အခါမျှအောင်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုယုံကြည်သောကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပြောဆိုမှုများစွာရှိသည်။ ငါနှစ်ခုအကြားနှိုင်းယှဉ်တန်ချိန်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် naysayers များ၏တရားဝင်မှုငြင်းခုံဆက်လက်အမြဲအံ့သြမိပါတယ် SaaS နှင့် RIAs.
Scrapblog ကဲ့သို့သော application သည်သင်၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲသင့်သည်။ The flash ကို Flex ကို interface ကလှတယ်။ ၎င်းတွင် desktop application တစ်ခု၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုအားလုံးရှိပြီး menu bar ပင်ရှိသော်လည်းအွန်လိုင်းတွင်အလွယ်တကူအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် 2Gb RAM ရှိပြီးကျွန်ုပ် Firefox Memory Usage သည်အပြည့်အဝ application ဖွင့ ်၍ လည်ပတ်ပြီး 50Mb သာခုန်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို desktop app နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
အကယ်၍ ၎င်းသည် desktop application ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး! လျှောက်လွှာ၏အခွံမာများနှင့်သော့ခလောက်များကိုအာရုံမစိုက်ပါကကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်ချွတ်ယွင်းချက် ရှိ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကြည့်နိုင်သည်။ ဒါကဝဘ်ရဲ့အနာဂတ်ပါ။